I-China 160HP bulldozer kanye ne-220HP hydraulic bulldozer enefektri yeripper yangemuva nabahlinzeki |LAYISHA
160HP ugandaganda kanye 220HP hydraulic bulldozer nge ripper ngemuva
I-HD16 kanye ne-HD22 imodeli ye-hydraulic transmission bulldozers inezici zobuchwepheshe obuphezulu, umklamo othuthukisiwe, amandla aqinile nokusebenza kahle okuphezulu, njll. Ingakwazi ukuzivumelanisa nendawo yokusebenza enokhahlo futhi ilungele ukulungiswa nokulungiswa.
Isetshenziswa kakhulu ekuphusheni, ekumbeni, ekugcwaliseni umhlaba kanye nokunye ukusebenza kwempahla ngobuningi bemigwaqo, ojantshi, izimayini, izikhumulo zezindiza, njll. Kuyimishini edingekayo yobunjiniyela bezokuvikela kuzwelonke, ukwakhiwa kwezimayini, ukwakhiwa kwemigwaqo yasemadolobheni neyasemaphandleni nokongiwa kwamanzi. ukwakhiwa.
I-bulldozer ivame ukutholakala ezindaweni ezinkulu zokwakha.Kuyi-crawler (ugandaganda olandelwayo oqhubekayo) onensingo yokuphusha imfucumfucu, isihlabathi, nomhlabathi, phakathi kokunye.Yaqala ukuthandwa ngawo-1920 futhi igcina ukuduma kwayo njengemishini yendawo yokwakha ngenxa yokusetshenziswa kwayo okuningi.
Ogandaganda baphakathi kwemishini esinda futhi ehlala isikhathi eside esetshenziswa ekwakheni.Ziwusizo futhi kwezinye izingosi ezinjengamafekthri, amapulazi, izinkwali, izizinda zamasosha kanye nezimayini.
I-FORLOAD brand bulldozer eyamukela izindinganiso zokuphuma kwe-Europe III, i-bulldozer ifakwe injini yokulawula kagesi phakathi kokupholisa emoyeni ukuya emoyeni, enegunya elinamandla nokusetshenziswa kancane kukawoyela;
Futhi ifakwe isiguquli se-torque se-hydrostatic esinomsebenzi wokukhiya, i-bulldozer inezici ezinhle kakhulu zokushayela, ezinenzuzo ezimweni ezihlukahlukene zokusebenza;
Isistimu yamabhuleki isebenzisa uhlobo oluvamise ukuvaleka, ukubhuleka ngemva kokuma kwenjini ukuze kuphephe kakhulu;
Isisetshenziswa esisebenzayo sisebenzisa izilawuli zokushayela ukuzwela okuhle kakhulu nokusebenza, okwenza kube lula ukusebenza;
I-bulldozer ifakwe ikhebhu yomsindo ophansi ene-ROPS/FOPS, ehlangabezana nezinga lokuphepha lamazwe ngamazwe, inokusebenza okuhle kakhulu kokuvala, nomsindo wasendlini ofinyelela emazingeni aphakeme ngamazwe ngamazwe;
Izingxenye ezinkulu eziyinhloko zesakhiwo ziqiniswa ekwakhiweni, ukuthuthukisa ukwethembeka;
Uhlelo lokuhamba olumisiwe luvumela i-bulldozer ukuthi isebenze ezimeni ezihlukahlukene zomgwaqo eziyinkimbinkimbi, isebenzisa ukudambisa ukudlidliza okuphumelelayo ukuze kuthuthukiswe ukunethezeka okuphelele nokuthembeka kwe-chassis;
Ifakwe isikrini esikhulu sokubonisa esimibalabala;ugandaganda uyakwazi ukuzigada.
Ukucaciswa okuyinhloko kanye nekhotheshini:
160HP Uhlobo Olujwayelekile Lwe-Hydraulic Crawler
220Uhlobo lwe-HP Standard Hydraulic Crawler
Ubukhulu (akukho ripper)
Ubukhulu behla ngaphansi komhlaba
Landelela ububanzi bezicathulo
Inani lesixhumanisi sethrekhi
Inani lamarola enkampani yenethiwekhi
Inani lamarola ethrekhi
12(8 I-Double+4 eyodwa)
213 L / iminithi
262L / min
Amandla kagandaganda aphezulu
Okwedlule: I-WZ40-28 kagandaganda backhoe Loader enenjini ye-YUCHAI kanye ne-telescopic boom
Olandelayo: I-H906D mini yokulayisha isondo likagesi isilayishi sebhethri